Maxay tahay sababta Itoobiya ay u xireyso dhammaan dugsiyada sare ee dalka? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxay tahay sababta Itoobiya ay u xireyso dhammaan dugsiyada sare ee dalka?
Mas’uuliyiinta dalka Itoobiya ayaa xiray dhammaan dugsiyada sare ee dalkaasi si ardaydu ay dadka beeroleyda ahi ee ku maqan safka hore ee dagaalka ka dhanka ah kooxda TPLF uga caawiyaan goosashada dalagyada beeraha.
Warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa wasiirka waxbarashada Itoobiya ayaa sheegtay in dugsiyada sare ay xirnaan doonaan muddo hal usbuuc ah oo ka billaabanayso isniinta soo socota.
In ka badan laba milyan oo arday ah ayaa horay uga maqnaa dugsiyada dalkaasi sababo la xiriria colaadda dalkaasi oo sanad ka hor ka soo billaabatay gobolka woqooyi ee Tigray.
Inkastoo wax colaad ah aysan ka jirin dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya, haddana xafiiska waxbarashada deegaanka Soomaalida ayaa BBC-da u sheegay in dugsiyada sare ee deegaanku ay xirnaanayaan muddadaasi usbuuca ah, si loogu hoggaansamo amarka wasaaradda waxbarashada ee heer federaal.
Cabdulqaadir Macallin Shukri oo ah wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in maadaama gobolku aysan ka jirin beero badan muddadaasi ardayda deegaanku ay ka qeyb qaadan doonaan olole ay wasaaraddu billaabeyso sida dig shubid iyo in niyad ahaan la taageero dagaalka ciidamada dalkaasi Itoobiya ay uga soo horjeedaan ururka TPLF.
Xilli dagaalku uu sii xoogaysanayo ayaa ciidamada dawladdu Itoobiya waxay sheegeen in ay magaalooyin badan ka qabsanayaan fallaagada TPLF.
Colaadda dalkaasi ayaa sababtay dhibaato bini’aadannimo iyadoo in ka badan 300 oo dugsi oo wax lagu baran jiray ay colaadda ku burbureen laga soo billaabo billowgii colaadda iyo bishii Oktoobar ee sanadkan, sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta Facebook ee wasaaradda waxbarashada Itoobiya.
Qoraalkaasi wasaaradda ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ku dedaali doonto sidii ay dib ugu dayactiri lahayd dugsiyadii burburay.
Colaadda ayaa sii xoogeysatay kaddib markii bishii aynu soo dhaafnay ee Nofeembar maleeshiyaadka fallaagada TPLF ay sheegeen in ay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa.
TPLF waxay sidoo kale qaadeen weerarro ay ku doonayeen in ay ku gaaraan xudduudda Itoobiya ay la leedahay Jabuuti ee dhinaca bari – taasi oo muhiim u ah marinka saadka u socda dhanka Itoobiya oo aan lahayn Bad.
Arrintaasi ayaa keentay in ra’iisalwasaare Abiy Axmed uu sheego in uu ku biirayo dagaalka ka socda jiida hore, halkaasi oo uu ku maqnaa tan iyo xilligaasi.
Fallaagada TPLF ayaa sheegtay in ay dib uga gurteen deegaannada qaar ee ay ciidamada dowladda sheegeen in ay dib ula wareegeen.
Previous articleM/weyne Biixi oo Xilka-qaadis & Magacaabis sameeyay
Next articleXildhibaan Ilhaan Cumar oo soo bandhigtay Hanjabaad Cod halis ku ah nolosheeda oo loo soo diray